Dhageyso cod sir ah: Xafiiska R/Wasaare Khayre oo ceebtii Ugu Cusleyd dhexda ka taagan…. | Badweyn.com
Dhageyso cod sir ah: Xafiiska R/Wasaare Khayre oo ceebtii Ugu Cusleyd dhexda ka taagan….
Oct 8, 2017 - 1 Jawaab
Codkan oo 53 ilbiriqsi ah, ayaa waxaa laga maqlay La taliyaha Ra’iisal Wasaaraha oo nin joogga Magaalada Baydhabo ka dalbanaya in uu soo duubo codadka dad dhex joogga magaalada, misena wax ka sheegaya Maamulka Koonfur Galbeed.
C/qaadir Cashar Nadaara, ayaa waxaa la maqlaya isagoo ninkaasi ku amraya inuu soo wareysto dad miisaan leh, oo aan la xiri karin, isla-markaana uusan soo wareysan dadka caadiga ah, ee ay dhici karto in xabsiga la dhigo.
Sidoo kale waxa uu ninkaasi ka dalbanaya in uu soo duubo dad ammaanaya siyaasadda ay dalka ku hogaaminayan Madaxweynaha Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo Ra’iisal Wasaaaha Xukuumadda, Xasan Cali Khayre, isla-markaana uu shaqadiia dardargeliyo, si loogu soo bandhigay barnaamij uu sheegay inuu bixi doono maalinta Jimcaha ee ina soo aadan.
Waxaa la maqlayaa Wariye Nadaara oo leh joogto ayaan ku soo wacayaa, ee teleefankaygan miyaa EVC/Zaad kuu leh, si uu ugu soo diro lacago laaluush ah.
Codkan, ayaa waxaa qabtay, soona bandhigay Sirdoonka Maamulka Koonfur Galbeed, si ay dadka ugu muujiyan in fara-gelin qaawan, ay ku hayso Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayre, sidoo kalena ay dadkeedu kala qaybinayso.
Dhibmalaha tisxigii buubuubkiisa badda fuuqkulul ayuudhudhacaa marka kheyre amah sharta mafugu xiligiisa oo mooshin lagageenilahaa ciyaarta waa weerar iyo weerar celis waaye marka kheyre weerarkiisa hadhameesto